Ngokungafani emabhishi abadumile ngaphezulu waseSpain Ibiza futhi Majorca, Platja de la Llosa kuyinto lolwandle ethule ogwini lolwandle edolobheni elincane Cambrils. Perfect imikhaya noma imibhangqwana ngifuna iholidi okuphumuzayo. Playa de la Llosa unemisebenzi zokudlela kanye amathilomu eseduze, kanye izambulela futhi loungers ngomvuzo, zangasese zomphakathi, futhi ukufinyelela sabakhubazekile.
Beach ngokwayo coves elincane elenziwe ngumuntu nomkhawulo amagagasi nasemagagasini. Kuhlanganiswe ne amanzi ecacile blue efudumele, lokhu kwenza ukubhukuda futhi snorkel okuphumuzayo kakhulu.
Kutholwe phezu edumile Algarve coast, the Meia Praia iyona enkulu kunazo zonke e-Lagos esifundeni futhi amabhishi ethu ngobukhulu efinyeleleka izitimela. Uma uqhathaniswa nezinye, ngaphezulu ezingxenyeni egcwele izivakashi-ka Algarve, Meia Praia kuyinto oasis ezine-ikhilomitha-eside langa isihlabathi segolide nokuzola. Kukhona futhi amathilomu Amabha dotted along the coastline. Unqenqema Sasentshonalanga ebhishi kancane matasa nakakhulu ngenxa isondele Lagos.
Base benomsebenzi, esekusithekeni ogwini zasendle, engonakalisiwe eNingizimu-Western ugu waseFrance, Ibhishi Senix (futhi ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi Cenitz) iyona uya khona ephelele lomqali Surfers, imindeni noma abahambi solo. Enhliziyweni Ezweni French Basque, phakathi Biarritz futhi Saint-Jean-de-Luz, Guethary kuyinto endala ebukekayo komzana.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-european-beaches-accessible-by-trains/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)